Ogaden News Agency (ONA) – Xuska Maalinta Xasuuqa Ogadenya oo lagu qabtay Finland
Xuska Maalinta Xasuuqa Ogadenya oo lagu qabtay Finland
Maanta oo ay taairiikhdu ayhayd 28.03.2014 ayaa waxaa laga xusay dalka Finland maalinta xasuuqa ogaadenia, Barnaamijkan oo ay isku soo dubarideen Jaaliyada Soomalida Ogaadeenia iyo ururka OYSU qaybtiisa Finland. Wuxuu ka farmay xuska Hoolka shirarka ee Föreningen Luckan Rf ee ku yaala bartamaha magaalada Helsinki.
Waxaa ka soo qayb galay xuska jalaiyadda oo uu horsocdo Guddooomiyaha jaaliyada Soomaalida Ogaadeenia, Haya’do kala duwan oo ah kuwa u dooda xuquuqda biniaadamka, Ururada dhalinyarada OYSU magaalada Helsinki iyo nawaaxigeeda, Dhalinyaro Soomaaliyeed iyo hawlwadeenada ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Soomaalida Ogaadeenia.
Waxaa lagu Falanqeeyey goobta shirka sidii loo xoojin lahaa soo saarida qadiyada Ogaadeenia iyo ka hortaga xasuuqyada ay Itoobiya ka wado dalkaasi ogaadeenia, waxaa sidoo kale lagu falanqeeyey sidii dacwad loogu soo oogi lahaa dadka ay Itobiya u adeegsato fal dambiyeedka shacabka lagu dhibaateeyo ee isla markaana magangalyo siyaasadeed ku jooga wadamadan Yurub.
Ugu danbayntii waxaa codbaahiyaha lagu soo dhaweeyey muddane Cabdullaahi Xuseen oo ku soo bandhigay filimkii (the dictatorship prisoners) oo si fiican looga daawday qaabka ay dawlada Itoobiya iyo maamulka Jigjiga ula dhaqmaan shacabka Soomaalida Ogaadeenia, Kaaso oo murugo ku reebay dhamaan dadkii goobta isugu yimid.
Isku soo duuboo waxay haya’dihii iyo dadwaynihii goobta isugu yimid ayaa waxay balan qaadeen in ay u guntanayaan shacabka ku tabaalaysan Ogadenya ilaa ka dhamaado cadaadiska lagu hayo shacabka aan waxba galabsan ee Ogaadeeinia.